Maya Magazine: တိန့်ရှောင်ပိန်ရေးသူ- မောင်အေးဝင်း
ကျနော့်ကို အင်းစိန်ထောင်မှာ တိုက်ထဲကနေ အဆောင်ကို ခေါ်ပေးဖို့ တာဝန်ခံတွေကို တောင်းဆိုခဲ့တာ "တိန်ရှောက်ပိန်" ပေါ့။ ကျနော်က စရောက်ကတည်းက တိုက်မှာ တနှစ်နီးပါးရှိနေပြီ။ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ စိတ်ချ လောက်တဲ့ လူတွေကို တိုက်ကနေ တတိတိနဲ့ အဆောင်ကို ရွေးထုတ်သွားတယ်။ ဒီထဲမှာ ကျနော်တို့ မပါသေးဘူး။ တချို့ဆို အဆောင်ရောက်ပြီးမှ တပါတ်ကျော့ တိုက်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့သူတွေ ကျနော်တို့နဲ့ ဆုံခဲ့ရပြန်တယ်။ အရှေ့လေက သိန်းသန်းဦးတို့ ၃ ဆောင်မှာ ကိုစိန်လှအောင်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ တိုက်ကို ရောက်လာတယ်။
တညနေမှာ တိုက်သစ်ထဲမှာ ကျနော်တို့ အခန်းက လူတွေ ရေမချိုးခင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေတုန်း တိုက်တံခါး လာဖွင့်တယ်။ "ဌေးဝင်း အဘ ဦးသန်းမောင်၊ အေးဝင်း အဘ ဦးကျော်ဒွန်း ထွက်....." တဲ့။ ကိုယ်က ဖျာကြမ်းပေါ် ကျောခင်းလဲလျောင်း နေရာကနေ "ဌေးဝင်းက အဘ ဦးသန်းမောင် ဟုတ်တယ်၊ အေးဝင်းက အဘ ဦးကျော်ဒွန်း မဟုတ်ဘူး၊ ဦးကျော်ဒွန်းက ယောက္ခမကွ ဘာလို့ ထွက်ရမှာလဲ.. ဘာလုပ်မလို့လဲ..." "ဟုတ် ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် အေးဝင်း ထွက်... " တဲ့။ ၀ါဒါကပြောတယ်။ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက် ထလိုက်သွားရတယ်။
တိုက်သစ်ဝင်းထဲက အလယ်အိမ်နားမှာ တိုက်မှာလာခေါ်တဲ့ ၀ါဒါက နောက်ဝါဒါတယောက် လက်ထဲကို ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို လွှဲတယ်။ နောက်လာတဲ့ ၀ါဒါက "လာလိုက်ခဲ့" တဲ့။ "ဘယ်ကို လိုက်ရမှာလဲ" ကျနော်က မေးတယ်။ မင်းတို့ကို အဆောင်ပြောင်းမလို့ တဲ့။ အဆောင်ကို ရောက်တော့ တပ်ကြပ်ကြီး လှရွှေက မင်းတို့ကို ဒီအဆောင်မှာ ထားဖို့ ငါက ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာတဲ့။ ဌေးဝင်းကို ထောင်ပိုင်ကြီးကပြောလို့၊ အေးဝင်းက.. ( ?) ...က ပြောလို့တဲ့။ တိန်ရှောက်ပိန် လို့ ကျနော်တို့ ချစ်စနိုး ခေါ်သူက ကျနော့်ကို အဆောင် ခေါ်ပေးဖို့ လှရွှေ ကို ပြောလိုက်တာတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အေးဝင်း ၃ ဆောင် ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်။
တိန်ရှောက်ပိန် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲ။ ထောင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ သူတို့ အုပ်စုမှာတော့ သူက ဗိုလ်။ သြဇာအရှိဆုံး။ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့က ဟိုဘက် ဒီဖက် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ယောက်ဖ တော်ကြတာ။ ကျနော်ရေးချင်တာက သူ့ရဲ့ ဥာဏ်စွမ်းဥာဏ်စ၊ ကြံရည်ဖန်ရည်၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်။ လူပုသလောက် ဥာဏ်စွမ်းဥာဏ်စ အကြံအဖန် ကောင်းလွန်းလို့ သူ့ကို တရုပ်ပြည်က တိန်ရှောက်ပိန် နဲ့ နာမည်တူ ဘွဲ့ပေးထားတာ။
သူ့မှာ ပြောစမှတ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ သူသေ ကိုယ်ကျေ အပြန်အလှန် ရိုက်ကြတုန်းက သူ လက်ကြိုးသွားခဲ့ရတယ်။
သူက ကျနော်တို့ ထမင်းစားအုပ်စုရဲ့ စားဖိုမှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တိန်ရှောက်ပိန်။ သူ့မှာ ကျနော်တို့အတွက် ဘယ်လိုစားကြမယ်၊ ဘာတွေ ချက်ရမယ်၊ ဘာနဲ့ အလဲအလှယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... စတဲ့ အကြံအဖန်တွေ သူ့ခေါင်းထဲမှာ အမြဲ ထည့်ထားတယ်။ ကိုယ်တို့က အခန်းထဲက ဘယ်မှ မထွက်သူတွေ ဆိုတော့ ထွက်တဲ့လူတွေ ကို တိန်ရှောက်ပိန် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အသုံးချတယ်။
ကျနော် (၃) ဆောင်ရောက်တော့ ဂုံနီစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေက ရုံးချိန်း ထွက်နေရတယ်။ ဒီလူတွေကို တိန်ရှောက်ပိန် ကောင်းကောင်း အသုံးချတယ်။ ၈ လေးလုံး အပြီး၊ မယ်နပလောမှာ သင်္ဃန်းဝတ် တော်လှန်ရေးသမားကြီး၊ ဂုံနီစက်ရုံ အလုပ်သမားဟောင်း၊ ဘုန်းကြီး အဘ ဦးအောင်နုဆို တိန်ရှောက်ပိန်ရဲ့ ဘော်ဒါပေါ့။ အဲဒီ အလုပ်သမားတွေ စီရင်ချက်ကျပြီး ထောင်ကျသွားတော့လည်း သူ့မှာ အခြားလိုင်းတွေ ရှိတယ်။
ထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့က ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ သွင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ရှိတယ်။ တိန်ရှောက်ပိန်က ငွေကိုင်။ တနေ့တော့ သူက လာပြောတယ်။ "၀ါဒါတွေကို ၀က်သား မှာမလို့.. ဘုံပိုက်ဆံထဲက ပေးလိုက်မယ်နော်" တဲ့။ ကိုယ်ကလဲ ချပေါ့ ဆရာရေ..... ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ၀က်သား အစိမ်းရလို့ ၀က်သားဟင်း ချက်စားဖြစ် သေးတယ်။
သူ တော်တာက နိုင်ငံရေးအယူအဆ လက်ဝဲသမား၊ လက်ျာသမား နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖောက်မပြန် ရန်သူ စစ်အစိုးရကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရန်ငါမျဉ်းပြတ်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဘယ်ဖက်ကမှ မငြိုငြင်ခဲ့ဘူး။ ရန်သူ့အပေါ် ပြတ်သားတဲ့ အမြင်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားက အေးချမ်းတယ်။
ပုံစံဆောင်ဖြစ်တော့ ကျနော်တို့ ထမင်းစားအုပ်စုထဲက ကျနော်တို့ ဘုံပစ္စည်းတွေ ထိမ်းသိမ်းတဲ့ ဆေးလိပ်တွေ သိမ်းတဲ့ ရဲဘော်လေးနဲ့ သူနဲ့ ခဏခဏ အငြင်းအခုန် ဖြစ်ရတယ်။ သူက အလောင်းအစား ၀ါသနာပါတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။ မနက်ဆို ဆေးလိပ်ဘဏ်တိုက်က သူ ဆေးလိပ်ထုတ်ပြီး အဆောင်က ဘောလီဘောပွဲတွေ လောင်းတယ်။ နိုင်လာရင် သူတို့နှစ်ယောက် ဘာမှ ပြဿနာ မဖြစ်ဘူး။ မနက်က မင်းဆီက ငါ ထုတ်တာ ဘယ်လောက်၊ ခု ဘယ်လောက် တွေ့တယ်မဟုတ်လား... ပေါ့လေ။ ရှုံးလာရင် သူ အသာလေး ငြိမ်ကုတ်နေတယ်။ မနက်က ထုတ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်လည်း ပြန်မအပ်နိုင်ဘူး။ ဟိုကလဲ ည ကျ အဆောင်ပိတ်ရင် ဘယ်မှာလဲ မနက်က ထုတ်သွားတဲ့ ဆေးလိပ် ဆိုပြီး ကြွေးတောင်းတယ်။ မရရင် သူ့ကို ပူညံ ပူညံ လုပ်ရော။ အတော်လဲ ရီရတဲ့ တိန်ရှောက်ပိန်။ ခုတော့ အဲဒီ ရဲဘော်လေးလည်း န၀တ လက်ထက်မှာ ပုသိမ်ထောင်ထဲ သေသွားရှာပါပြီ။
အခန်းထဲက ထင်းတွေကို အာဏာပိုင်တွေက တလာစီပြီး သိမ်းသွားတယ်။ မီးအငြိမ်း။ ချက်စရာလည်း မရှိဘူး။ ချက်ခွင့်လည်း မရကြဘူး။ အခန်းတိုင်း ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့မှာတော့ တိန်ရှောက်ပိန် အစီအစဉ်အရ လုံချည်ပြာကို ခေါ်ပြီး ချက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သူက အိုးထဲမှာ အဆင်သင့် နယ် စပ် ပေးလိုက်တယ်။
အဆောင်မှူးက ကိုယ်တို့ အခန်းထဲ ပိုက်ဆံတွေ ရှိနေမှန်းသိလို့ တလာစီတယ်။ ရမသွားဘူး။ အဆောင်မှူး ကြက်၂ ကောင်ကို ကိုယ်တို့ သတ်စားလိုက်တယ်။ လက်သည် မပေါ်ဘူး။ သိလျက်နဲ့ အဆောင်မှူး ခံသွားရတယ်။ တဖက်လှည့်နဲ့ ကြက်ဝယ်မလားဆိုပြီး ၀ါဒါကနေ တဆင့် ကြက်လာရောင်းတယ်။ တိန်ရှောက်ပိန်က ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး ဈေးနှိမ်ဆစ်လိုက်တယ်။ ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ တိန်ရှောက်ပိန်။
Posted by Maung Aye Win at 5:51 PM
Please go on your writing about this post. Thank you so much.